Njirimara, ntọala na ike nke okpu polar | Netwọk Mgbasa Ozi
N’elu ụwa anyị, e nwere ọtụtụ akpụrụ mmiri na-ekpuchi okporo osisi ugwu na ndịda. Akpụrụ a abụghị naanị n'oké osimiri kamakwa ọ na-ahụkwa na ugwu ugwu. A maara otutu ice ndị a glaciers. Mgbe glaciers ndị a ruru ogo buru ibu nke na ha na-ekpuchikarị ma ebe sara mbara, a na-akpọ ha pola ice caps.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mkpa, ike mmụọ nke okpu polar ndị a yana ihe ga - eme ma ọ bụrụ na igwe mmiri ndị a niile agbaze.
1 Nhazi nke glaciers
2 Mgbatị nke mmekọrịta
3 Uzo pola na okpu ice
4 Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na oghere ice polar gbazee?
Nhazi nke glaciers
Iji nye ohere maka okpu pola, ọ dị mkpa ịmara ụzọ esi akpụ glaciers ka ha wee gbasaa n'ụzọ ga-emecha rụọ okpu pola. All mkpuchi ice nke gbasara n'oge ikpeazụ glaciation ma ọ bụ ice afọ mechaa glaciers. Igwe mmiri ndị a dị ezigbo mkpa dị ka ndị ọrụ na-ekpo ọkụ na ndị na-ewu ụlọ nke enyemaka, ala na odida obodo.
Ihe ọzọ mere ha jiri dị mkpa bụ na ha mejupụtara nnukwu mmiri dị ọcha na mbara ụwa. E nwere ọtụtụ ihe dị ndụ na-erite uru na mmiri meltwater nke glaciers iji dịrị ndụ, mụta nwa ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ebe obibi ha.
A na-etolite glaciers a site na-akwakọba, kwa afọ, snow nke na-adaba na ala na mkpọda nke ndagwurugwu. Ha dị na mpaghara ugwu dị elu. Okpukpo nwere ike iru oke buru ibu ma oburu na snow nke furu efu n’ihi okpukpu okpukpu bu ihe na-erughị nke na-agbakọta n’oge oge snow.
A na-emepụta kọmpat nke snow a n'ihi na a na-atụkwasị snowfall ọ bụla na nke etinyeburu na mbụ. Ọ bụrụ na okpomoku nke gbazee ahụ agbaze ice, ọ ga-eme ka ọ tọọ ma bido ịkwaga na ndagwurugwu.
Njupụta nke snow na-abawanye site na omimi dị ka nnukwu mmiri nke snow n'otu mpaghara, na-adịkwu oke. Isi a nke ha nwere bu isi ala nke glacier ma o gha ka o buru mmiri. N'ime glacier ọ na-eme ngwa ngwa karịa mpaghara mpụta, yabụ enwere oge ezumike, nsogbu na ịgbatị nke na-eme ka mgbawa dị elu.
Mgbatị nke mmekọrịta
Glasia na-agbagharị ma na-efopụ nkume ndị bụ amụma ndị dị na ụzọ ya. A na-akpọ iberibe nkume ndị na-esite n’agha a nke glaciers dị ka moraines. Mpaghara dị na njedebe nke glacier bụ ebe agbaze agbaze. N'ebe a, ị ga-ahụ etu esi kpụọ obere ugwu a na-akpọ moraine ọnụ.
Ọ bụrụhaala na glacier na-ejigide mpaghara nchịkọta n'akụkụ elu nke snow site na ọdịda, okirikiri nke glacier ahụ ga-adịgide ndụ. N'ikpeazụ, na mpaghara dị ala, glacier na-agbaze, na-eme obere iyi nke mmiri dị mma.
Enwere ụfọdụ glaciers nke na-agafe na ndagwurugwu dị n'okpuru usoro usoro ugwu. Mgbe ha sonyere na-etolite nnukwu glacier a maara ya dị ka piedmont.
Uzo pola na okpu ice
Ozugbo anyị ghọtara ihe glacier bụ, otu o si akpụ na etu o siri arụ ọrụ, anyị na-aga ịkọwa okpu pola ice. Ọ bụrụ na glacier ahụ e kwuru na mbụ kpuchitere ezigbo ala na agwaetiti na ugwu na ala dị larịị, a maara ya dị ka okpu polar. Akụkụ pola ndị a na-amụkarị na glaciers alpine ma gbadaa na ndagwurugwu. N'ikpeazụ, ha na-erute oke osimiri oge ufodu.
Ọ bụrụ na mmiri kpụkọrọ akpụkọ sara mbara nke na ọ kpuchiri elu kọntinent dum, a na-akpọ ya ice ice kọntinent. Nke a na - eme n’akụkụ pola ice nke Arctic na Antarctica. Nnukwu oyi akwa a na-asọpụta pụta ruo mgbe ọ ruru n'oké osimiri ma ọ bụ ebe ahụ ka ọ na -agbawa n'ime ụdị nha dị iche iche na-akpụ icebergs.
A na-eji okwu a bụ polar caps kọwaa ụdị ice dị iche iche dị na Antarctica na Greenland. N'ihi ya, Mgbe ọ bụla anyị na-ekwu maka okpomoku zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ mgbanwe ihu igwe anyị na-ekwu maka agbaze nke oghere ice polar. Ekpuru okpu pola ndị a na mkpanaka abụọ ahụ n'oge afọ ice Pleistocene, na oge Quaternary wee bịa kpuchie ọtụtụ Northern Hemisphere.
A mara pola okpu mara dị ka a glacial ma na-enwekarị ndọtị nke ihe karịrị kilomita 1,8 nke kilomita elu nke elu. Na usoro nke ọkpụrụkpụ, ha nọ na 2.700 mita kachasị elu. Ihe okpu a na-ekpuchi elu Greenland. Ebe a na-apụta n'akụkụ ikpere mmiri ebe glacier na-esighi ike, ha na-agbasasịkwa n'asụsụ ice. Mgbe asụsụ ndị ahụ rutere n’oké osimiri ahụ, ha na-agafere irighiri mmiri kpụkọrọ akpụkọ n’oge ọkọrọ, na-akpụ ice.
Icebergs nwere ike dị iche iche nke ha, ọ ga-apụ n’anya kemgbe ọtụtụ afọ. Otu okpu nke ihe ike a na-ekpuchi Antarctica, naanị glacier a ọ nwere ebe 13 nde square kilomita.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na oghere ice polar gbazee?
Site na mgbanwe ihu igwe na mmụba nke mmetụta griin haus, a na-ekwu banyere agbaze nke oghere ice polar. Mmetụta ozugbo nke a bụ na oke osimiri ga-ebili. Chee echiche na igwe ndi ice na etinye ihe ruru 70% nke mmiri ohuru na uwa. Ọ bụrụ na mmiri a, nke ahụ dị n'elu ala na-agbaze, ọ ga-ejedebe n'oké osimiri.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-eme atụmatụ na ka ọ na-erule afọ 2100, oke osimiri ga-ebili na nkezi nke centimita 50 site na oke osimiri. Nke a pụtara na ọtụtụ obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri ga-emetụta n'ụzọ dị njọ na ọtụtụ ihe ndị dị ndụ na gburugburu ha ga-emegharị ọzọ. Ke adianade do, albedo nke ụwa ọ ga-emetụtakwa ebe ọ bụ na e nwechaghị ala ọcha na-egosipụta ihe ọzọ mere radieshon anyanwụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere okpu polar na nsonaazụ nke agbaze ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Polar ice okpu